Amazon Prime Day dia nohamafisina tamin'ny 21 sy 22 Jona | Avy amin'ny mac aho
02-06-2021 Amazon's 'Prime Day' amin'ny 21 sy 11 Jona 2021
ECONOMY CATALONIA SPAIN EUROPE BARCELONA ORINASA
Tsy isalasalana fa ity dia iray amin'ireo hetsika andrandrain'ireo mpampiasa manana kaonty Prime ao amin'ny magazay an-tserasera Amazon. Mazava fa isan-taona ny tolotra natsangany sy mihabetsaka ny vokatra ao anatin'ireo andro fiantsenana roa ireo.
Imbetsaka isika no nahita eny fa na dia ny vokatra Apple sasany aza dia nisy fihenam-bidy tamin'ny vidiny mahaliana amin'izao fotoana izao, fa ambonin'izay rehetra hitantsika dia katalaogin'ny vokatra goavambe mamela ny mpampiasa hitahiry vola raha mbola manana ny kaonty Prime.
Amazon Prime Day amin'ny 21 sy 22 Jona miaraka amin'ny tolotra 2 tapitrisa mahery
Satria nanambara tamim-pomba ofisialy izy ireo fa ny hetsika 21 sy 22 jona ho avy izao dia mifanindry ny alatsinainy sy talata ireo andro ireo izay mpampiasa an-tapitrisany eto amin'ny firenentsika efa manana io karama fanampiny be io izay matetika tonga amin'ny faha-15 amin'ity volana ity. Izany no fotoana mety ahazoan'ny mpampiasa mividy entana misy fihenam-bidy misy resaka tolotra sy fihenam-bidy mihoatra ny 2 tapitrisa.
Jamil Ghani, filoha lefitry ny Amazon Prime dia nanazava tamin'ny haino aman-jery fa amin'ity taona ity dia ho avo kokoa ny tolotra ary izany ve mbola tsy nanolotra vokatra fihenam-bidy maro be toy izany izy ireo hatrizay, ho hitantsika eo hoe inona izany vokatra izany.
Mazava ho azy fa ao anatin'ny roa andro dia misy ihany koa ireo vokatra "junk" na ireo vokatra izay tsy misy mividy, fa hey, ny ankamaroan'ny vokatra dia lasa tolotra mahaliana. Mba hahafahana mankafy ireo tolotra ireo dia ilaina ihany ny fananana ny fisoratana anarana Prime mavitrika mba hahafahanao misafidy ny hampiasa ny 30 andro maimaim-poana raha tsy manana ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Nohamafisina tamin'ny 21 sy 22 Jona ny Praiminisitra Amazon